Iwu nchịkwa na-ekwu banyere ikike na ọrụ nke ụmụ amaala na azụmaahịa ndị gọọmentị. Mana iwu nhazi na-ahazikwa otu gọọmentị si eme mkpebi yana ihe ị nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị na mkpebi dị otú ahụ. Mkpebi gọọmentị bụ isi na iwu nchịkwa. Mkpebi ndị a nwere ike ịbara gị uru dị ukwuu. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka ị mee ihe ozugbo ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị mkpebi gọọmentị nke nwere nsonaazụ ọ bụla ga-ewetara gị…
> Iwu Iwu Nchịkwa Izugbe
> Nlekọta nchịkwa
> Ibu ọrụ nke gọọmentị
> Oge mmechi n'ime iwu nchịkwa
Inwere ike ịkpọtụrụ iwu nchịkwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ akwụkwọ ikike. Dịka ọmụmaatụ, nke a nwere ike bụrụ ikike mpaghara ma ọ bụ ihe ọ aụorụ na-aba n'anya na ikike ile ọbịa. Na omume, ọ na --eme mgbe niile na ndị jụrụ inye akwụkwọ ikike maka ezighi ezi. Citizensmụ amaala nwere ike jụ. Mkpebi ndị a gbasara ikike bụ mkpebi iwu. Mgbe ị na-eme mkpebi, gọọmentị na-achịkwa iwu ndị metụtara ọdịnaya na otu esi eme mkpebi ahụ. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịnwe enyemaka iwu ma ọ bụrụ na ị jụ ịhapụ akwụkwọ ikike gị. N'ihi na edepụtara iwu ndị a na ntọala nke usoro iwu na-etinye na iwu nchịkwa. Site na itinye aka onye ọka iwu, ị ga - ejide n'aka na usoro a ga - aga n'ihu nke ọma ma ọ bụrụ na nnabata na mgbe itinye akwụkwọ mkpesa.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ gaghị ekwe omume itinye mgbagha. N'ịga n'ihu ọ dịka ọmụmaatụ ọ ga - ekwe omume itinye akwụkwọ ikwu mgbe achụrụ mkpebi. Echiche bụ mmeghachi omume nke gị, dị ka ndị nwere mmasị, ị nwere ike izipu ndị isi tozuru etozu maka nzaghachi mkpebi. Ndị nwe obodo nwere ike iburu n'uche nke ekwuru mgbe ha ga-eme mkpebi ikpeazụ. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịchọ ndụmọdụ gbasara iwu tupu ị na-ekwupụta echiche gị maka mkpebi ae dere.
Inye ego enyemaka pụtara na inwere ikike ịnweta ego sitere n'aka onye na-achịkwa maka ebumnuche ịkwado mmemme ụfọdụ. Inye ego enyemaka mgbe niile nwere usoro iwu kwadoro. Na mgbakwunye na itinye iwu, ntinye ego bụ ihe ndị gọọmentị na-eji. N'ụzọ dị otú a, gọọmentị na-akpali omume a na-achọsi ike. Inye ego ntinye ego na-abụkarị ọnọdụ. Gọọmentị ga-enyocha ọnọdụ ndị a iji hụ ma ha na-emezu.
Ọtụtụ nzukọ na-adabere na ntinye ego. Ma na omume, ọ na --emekarị mgbe gọọmentị napụrụ ndị enyemaka ego. Nwere ike icheta ọnọdụ gọọmentị na - ebi ebelata. Enwekwara nchedo iwu gbasara imebi mkpebi nkagbu. Site na ịhapụ mwepu ego nke enyemaka, ị nwere ike, n’ụfọdụ oge, hụ na echekwabara ịnabata ego enyemaka a. You nwere obi abụọ ma ọ bụrụ na ewepụrụla ụtụ enyemaka gị ma ọ bụ nwee ajụjụ ndị ọzọ gbasara enyemaka gọọmentị? Wee nweere onwe gị ịkpọtụrụ ndị ọka iwu nhazi nke Law & More. Obi ga-adị anyị ụtọ inye gị ndụmọdụ ajụjụ gị gbasara enyemaka enyemaka gọọmentị.
May nwere ike gị na gọọmentị mgbe imebi iwu na mpaghara gị yana gọọmentị gwara gị ka itinye aka ma ọ bụ mgbe, dịka ọmụmaatụ, gọọmentị na-abịa site na inyocha ma ị na-agbaso ọnọdụ ikike ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ etinyere. Nke a ka a na-akpọ mmanye gọọmentị. Gọọmentị nwere ike ịkpọpụ ndị nlekọta maka ebumnuche a. Ndị na-ahụ maka ọrụ na-abanye na ụlọ ọrụ ọ bụla, na-ahapụkwa ha ịrịọ ozi niile dị mkpa na ka ha nyochaa ma were gọọmentị soro ha. Nke a achọghị ka enwere enyo siri ike na-emebi iwu. Ọ bụrụ nọnyereghi na ụdịrị ihe a, ị ga-ata gị ntaramahụhụ.
Ọ bụrụ na gọọmentị ekwupute na imebi iwu, a ga-enye gị ohere ịmeghachi mmemme ọ bụla achọrọ. Ime nke a nwere ike ịbụ ọmụmaatụ n'okpuru ụgwọ ntaramahụhụ, ụgwọ n'okpuru ntaramahụhụ nchịkwa ma ọ bụ nzere nchịkwa. Enwere ike ịwepu ikike maka mmanye.
Iwu n'okpuru ụgwọ ntaramahụhụ pụtara na gọọmentị chọrọ igbochi gị ime ma ọ bụ zere ime otu iwu, nke ga-eme ka i nweta ego ma ọ bụrụ na ịgbanyeghị ọnụ. Iwu n'okpuru ntaramahụhụ nchịkwa na-aga karịa nke ahụ. Site n'usoro iwu gọọmentị, ndị gọọmentị na-etinye ọnụ na ego ndị etinye ego na-egosikwa na esiri na gị. Nke a nwere ike bụrụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, mgbe a bịara ịkwatu ụlọ iwu na-akwadoghị, hichaa nsonaazụ nke mmebi gburugburu ma ọ bụ mechie azụmahịa na-enweghị ikike.
Ọzọkwa, n'ọnọdụ ụfọdụ gọọmentị nwere ike ịhọrọ ịmanye ntaramahụhụ site na iwu nchịkwa kama ime mpụ iwu. Ihe atụ nke a bụ ezi nchịkwa. Nlekọta nchịkwa dị mma nwere ike ịdị elu. Ọ bụrụ na-etinyere gị ntaramahụhụ nchịkwa ma kwenyeghị ya, ị nwere ike ịrịọ n'ụlọ ikpe.
N'ihi otu ịda iwu, gọọmentị nwere ike kpebie iwepụ ikike gị. Enwere ike itinye usoro a dịka ntaramahụhụ, kamakwa dị ka mmanye iji gbochie otu ihe ịmeghachi ọzọ.
Ibu ọrụ nke gọọmentị
Oge ụfọdụ mkpebi ma ọ bụ omume gọọmentị nwere ike ibute mmebi. N'ọnọdụ ụfọdụ, gọọmentị ga-akwụ ụgwọ maka mmebi a ma ị nwere ike ikwu maka mmebi ahụ. Enwere ọtụtụ ụzọ nke gị, dị ka onye ọchụnta ego ma ọ bụ nkeonwe, ị nwere ike na-ekwu maka mmebi site n'aka gọọmentị.
Iwu iwu akwadoghị
Ọ bụrụ na gọọmentị emee iwu na-akwadoghị, ịnwere ike ijide gọọmentị maka mmebi ọ bụla dakwasịrị gị. Na omume, a na-akpọ nke a iwu na-akwadoghị ọchịchị. Nke a bụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na gọọmentị emechie ụlọ ọrụ gị, onye ọka ikpe mechara kpebie na ekweghị ka nke a mee. Dịka onye ọchụnta ego, ị nwere ike ikwu ụdị ụkọ ego funahụrụ gị n'ihi mmechi nke gọọmentị.
Iwu ziri ezi nke gọọmentị
N'ụfọdụ, ịnwere ike ịmebi ihe ma ọ bụrụ na gọọmentị emeela mkpebi ziri ezi. Nke a nwere ike bụrụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, mgbe gọọmentị mere mgbanwe na mpaghara mgbatị, nke a ga - eme ka ụfọdụ ọrụ ụlọ ga - ekwe omume. Mgbanwe a nwere ike ime ka ị ghara inweta ego maka azụmahịa gị ma ọ bụ belata ọnụ ahịa ụlọ gị. N'ọnọdụ dị otu a, anyị na-ekwu maka ụgwọ maka ụgwọ mmebi ma ọ bụ nkwụghachi ụgwọ.
Ndị ọka iwu nchịkwa anyị ga-enwe obi ụtọ inye gị ndụmọdụ maka ohere ịnweta ụgwọ dị iche iche n'ihi ọrụ gọọmentị.
Inupu isi na ịrịọ arịrịọ
Tupu mgbochi a ga-ekpesa mkpebi nke gọọmentị n'ụlọ ikpe na-achị achị, a ga-ebu ụzọ mee ihe mgbochi. Nke a pụtara na ị ga-egorịrị edee n'ime izu isii ikwenyeghị na mkpebi ahụ yana ihe kpatara anaghị ekwenye. Ekwesịrị ịme nkwenye n'ụdị ederede. Ojiji email nwere ike ikwe omume ma ọ bụrụ na gọọmentị egosiputala nke a. Achọghị mkpesa dị na ekwentị dị ka mkpesa gọọmentị.
Mgbe abatasịrị ọkwa nke mkpesa, a na-enyekarị gị ohere ịkọwa ihe mgbochi gị n'okwu ọnụ. Ọ bụrụ n ’ị gosipụtara ziri ezi yana ekwuputala nhiwe nke ọma, mkpebi a ga-agbagha, mkpebi ọzọ ga-anọchi ya. Ọ bụrụ na egosighi na ị bụ onye ziri ezi, a ga-ekwupụta ihe kpatara ya enweghị ihe ndabere.
A ga-etinyekwara ụlọ ikpe ụlọ ikpe mkpegharị ikpe maka mkpebi mgbochi. A ga-etinyerịrị arịrịọ n'ime ederede n'ime izu isii. N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịme digitally. Subsequlọ ikpe ahụ mechara nyefee akwụkwọ mkpesa na ụlọ ọrụ gọọmentị na arịrịọ maka iziga akwụkwọ niile metụtara ikpe ahụ na ịzaghachi ya na nkwupụta nke agbachitere.
A ga-edozikwa oge ịnụ ihe. Thenlọ ikpe ga-ekpebizi mkpebi siri ike nghọta na mgbochi. Yabụ, ọ bụrụ na onye ọka ikpe kwenyere gị, ọ ga-ewepụ mkpebi ahụ maka ebupute gị. Ya mere usoro a akabeghị. Gọọmentị ga-eme mkpebi ọhụrụ gbasara ihe a.
Oge mmechi n'ime iwu nchịkwa
Ndị ọrụ gọọmentị gachaa ime mkpebi, i nwere izu isii iji kọọ mkpesa ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ. Ọ bụrụ na ị jụ ime n'oge, ohere gị ịme ihe megidere mkpebi ahụ ga-agafe. Ọ bụrụ na enweghị mkpesa ma ọ bụ mkpesa megidere mkpebi a, a ga-enye ya ikike iwu kwadoro. A na-echezi na ọ bụ ihe ziri ezi, ma na usoro o si kee ya na ọdịnaya ya. Oge amachibido iwebata ihe mgbochi ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ ka ọ dị izu isii. Kwesịrị ịchọpụta na ị na-etinye aka na iwu n'oge. Ọ bụrụ n disagreekwenyeghị na mkpebi, ị ga-etinye ọkwa nke mkpesa ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ n'ime izu isii. Ndị ọka iwu nhazi nke Law & More nwere ike nye gị ndụmọdụ na usoro a.
Anyị nwere ike ịgba akwụkwọ maka gị n'akụkụ niile nke iwu nchịkwa. Were, dịka ọmụmaatụ, ị nyefere ọkwa nye ikike n'aka ndị isi ọchịchị imegide iwu ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ịgba akwụkwọ n'ihu ụlọ ikpe gbasara ịhapụ inye ikike gburugburu ebe obibi maka ntụgharị nke ụlọ. Ndụmọdụ bụ akụkụ dị mkpa nke ọrụ anyị. N'ọtụtụ oge, iji ndụmọdụ dị mma, ị nwere ike igbochi ndị na - emegide gọọmentị.
Anyị nwere ike, n'etiti ihe ndị ọzọ, nye ndụmọdụ ma nyere gị aka na:
• itinye akwụkwọ maka enyemaka;
• uru etinyerela na iweghachi uru a;
• manye mmachi iwu nchịkwa;
• iju nke ngwa gị maka ikike gburugburu;
• iwelata iwepu akwụkwọ ikike.
Ceedga n'ihu na iwu nchịkwa na-abụkarị ezigbo ọrụ ọka iwu, ọ bụ ezie na enyemaka sitere n'aka onye ọka iwu na iwu abụghị iwu. Do na-ekwenyeghị na mkpebi gọọmentị nke nwere nsonaazụ dị ukwuu maka gị? Mgbe ahụ kpọtụrụ ndị ọka iwu nhazi nke Law & More ozugbo. Anyị nwere ike inyere gị aka!